Sida Loo Adeegsado Falanqaynta Socdaalka Macmiilka Si Loo Kordhiyo Dadaallada Suuqgeynta Jiilkaaga | Martech Zone
Sida Loo Adeegsado Falanqaynta Socdaalka Macmiilka Si Loo Hagaajiyo Dadaallada Suuqgeynta Jiilkaaga
Si kor loogu qaado tayadaada dhalinta dalab dadaallada suuqgeynta si guul leh, waxaad u baahan tahay inaad ka dhex muuqato tillaabo kasta oo ka mid ah safarada macmiishaada iyo hababka lagu dabagalo loona lafaguro xogtooda si loo fahmo waxa ku dhiirrigeliya hadda iyo mustaqbalkaba. Sidee baad taas u samaynaysaa? Nasiib wanaag, falanqaynta safarka macmiilku waxay siisaa aragtiyo qiimo leh qaababka dabeecadaha soo -booqdahaaga iyo doorbidyada inta ay ku jiraan safarka macmiilka oo dhan. Aragtidaani waxay kuu oggolaaneysaa inaad abuurto waayo -aragnimo macmiil oo la xoojiyay oo ku dhiirrigeliya booqdayaasha inay gaaraan barta ugu dambeysa ee dhuunta iibkaaga.
Waa maxay dhab ahaan falanqaynta safarka macmiilka, sideedse u isticmaali kartaa si aad u wanaajiso xeeladaha suuqgeynta jiilka hoggaamineed? Aan ogaano.
Waa Maxay Falanqaynta Socdaalka Macmiilka?
Falanqaynta safarka macmiilka waa codsi si cad u falanqeeya safarada macmiilka. Codsigan wuxuu ku lug leeyahay raadraaca iyo falanqaynta habka macaamiishaadu u adeegsadaan kanaallo kala duwan si ay ula falgalaan astaantaada. Waxay falanqaynaysaa dhammaan kanaalada - hadda la isticmaalo iyo mustaqbalka - ee macaamiishaadu toos u taabtaan.
Kanaaladan waxaa ku jiri kara:
Kanaalada leh isdhexgalka dadka, sida xarumaha wicitaanka
Kanaallada is-dhexgalka ee labada dhinac, sida xayeysiiska muujinta
Kanaalada si otomaatig ah u shaqeeya, sida aaladaha gacanta ama mareegaha
Kanaalka dhinac saddexaad ka shaqeeya, sida dukaamada tafaariiqda ee madaxbannaan
Kanaallada bixiya kaalmada macmiilka ee nool, sida goob -wadaagga goobta wada -hadalka ama sheekaysiga tooska ah
Maxaan ugu Baahanahay Falanqaynta Socdaalka Macmiilka?
In kasta oo safarada macmiilku ay sii kordhayaan kakan, macaamiisha maanta waxay filayaan is -dhexgalkooda ganacsi ee sumaddaada - kanaallo badan - inay la jaanqaadaan hoggaamiyeyaasha CX sida Amazon iyo Google. Haddii safarada macaamiishaadu aysan ahayn kuwo aan kala go 'lahayn talaabo kasta oo jidka ah, waxay noqon doonaan kuwo aan ku qanacsanayn oo si dhaqso ah ugu gudbaya tartame. Taa bedelkeeda, daraasaduhu waxay muujinayaan taas waayo -aragnimo macmiil oo togan kobcinta dakhliga.
Daraasaduhu waxay kaloo muujinayaan in maalgelinta maareynta ra'yi -celinta macaamiisha aysan ku filnayn hagaajinta heerarkaaga CX. Fashilkan waxaa loo aaneynayaa xaqiiqda ah in jawaab -celinta guud ahaan laga codsado kaliya meelaha safarka. Nasiib darro, tani waxay ka dhigan tahay in kaliya qaar ka mid ah safarka macmiilka la qabtay, oo si khaldan u soo bandhigaya waaya -aragnimada guud ee macaamiishaada.
Xogtan aan dhammeystirnayn waxay yaraynaysaa awooddaada inaad ku hesho sawir dhammaystiran iyo aragtiyo sax ah oo ku saabsan waxqabadka istaraatiijiyadda suuqgeyntaada. Waxay sidoo kale kaa tagaysaa khasaaro kor u qaadida khibradaha macaamiisha iyo ku xidha waayo -aragnimada macmiilka natiijooyinka ganacsi ee la taaban karo.
Falanqaynta safarka macmiilka ayaa ah buundada u dhaxaysa dabeecadaha macaamiishaada iyo natiijooyinka ganacsigaaga. Barnaamijka falanqaynta safarka macmiilka ayaa u suurtogelinaya ganacsigaaga inuu la socdo, cabbiro oo hagaajiyo waayo -aragnimada macmiilka dhowr meelood oo taabasho iyo waqtiyo ah, oo ka kooban safarka macaamiisha oo dhan.
Kordhinta falanqaynta safarka macmiilka ayaa u saamaxaysa dalabka hoggaamiyeyaasha suuqgeynta inay ka jawaabaan su'aalaha adag, sida:
Maxaa keena dabeecadaha macaamiisheena?
Waa maxay is -dhexgalkii hore ama socdaalladii ay macaamiisheennu sameeyeen ee halkan keenay?
Waa maxay waddooyinka ay macaamiisheennu ku maraan safarradooda?
Maxay yihiin natiijada ugu badan ee macmiil kasta ama safar kasta?
Sidee safaradan iyo natiijooyinkani u saamayn doonaan natiijooyinka ganacsigeena?
Maxay yihiin hadafyada macaamiisheena?
Sidee ayay hadafyadooda ula jaanqaadayaan hadafyadayada ganacsi?
Sideen ugu kordhinnaa qiime macmiil kasta oo aan kor ugu qaadnaa khibraddooda macmiilnimo?
Waa Maxay Faa'iidooyinka Falanqaynta Socdaalka Macmiilka?
Falanqaynta safarka macmiilku waa qayb muhiim u ah barnaamijka maaraynta safarka macmiilka ee wax ku oolka ah. Waa gabal gorfeeya xog dhammaystiran oo soo saarta aragtiyo waxqabad leh. Aragtiyaha laga helay barnaamijkan maareynta macmiilka ayaa qiimo u leh macaamiisha iyo ganacsiyada labadaba. Waa tan sida.
Khibradaha Macaamilka ee La Hagaajiyay (CX) - Aragtida laga helay falanqayn wax ku ool ah oo ku saabsan safarada macaamiishaada ayaa kuu saamaxaysa inaad kor u qaaddo tillaabo kasta oo jidka ah si aad u hesho khibrad guud oo aan kala go 'lahayn.
Natiijooyinka Waxqabadka La Cabiri Karo ee Socda - Intaa waxaa dheer, falanqaynta socota waxay kuu oggolaaneysaa inaad si joogto ah u cabbirto waxqabadka dadaallada suuqgeynta baahida dalabka ee waddooyin badan oo qeexaya KPI -yada habboon si loo cabbiro safar kasta.
Falanqaynta Xogta Laga Helo Kanaallo Tiro Badan iyo Waqtiyada - Markaad eegto safarada macmiishada ee dhowr kanaal iyo waqtiyo, dhibco dhab ah ayaa cad. Aqoonsiga dhibcaha xanuunku waxay kuu suurtogelinaysaa inaad tallaabo qaaddo oo saamayn togan ku yeelato safarada macaamiishaada.
Sideen U Hagaajin Karaa Falanqaynta Socdaalka Macmiilka? - Falanqaynta safarka macmiilka waxaa sida caadiga ah hagaajiya hoggaamiyeyaasha adeegga macaamiisha, falanqaynta, suuqgeynta iyo CX. Hoggaamiyayaashan ayaa korsanaya aaladaha falanqaynta safarka macaamiisha si loo hagaajiyo dalabkooda xeeladaha suuqgeynta jiilka iyo awoodaha cabbiraadda waxqabadka.
Kooxahani waxay kor u qaadaan falanqaynta safarka macmiilka si ay:
Amass xogta safarka macmiilka
Xalliyaan aqoonsiyada macmiilka kanaalka badan
Falanqee isdhexgalka aan la tirin karin inta lagu jiro safarada kala duwan ee xad-dhaafka ah
Aqoonso dhibcaha xanuunka CX iyo sababaha asaasiga ah
Xaqiiji wanaajinta safarka macmiilka ee iman kara
Qiyaaso maalgelinta CX 'ROI
Khariidadda Socdaalka Macmiilka iyo Falanqaynta Socdaalka Macmiilka
Markaad tahay suuqgeeyaha jiilka dalabka, waxaad hore u hirgelin kartaa khariidaynta safarka macaamiisha oo aad dareento inay bixinayso aragtiyo la mid ah falanqaynta safarka macmiilka. Nasiib darro, xaalku sidaas ma aha. In kasta oo khariidadda safarku ay diiradda saareyso aragtiyo tayo leh, falanqaynta safarka macmiilku waa ka tiro badan yahay waxayna ku dartaa baaxad aad u weyn.
Sawir -gacmeedyada Maqaalka ah iyo Faahfaahinta Joogtada ah - Khariidaynta safarku waxay bixisaa sawirro aan caadi ahayn oo ka mid ah qaar ka mid ah safarada macaamiishaada oo aan lahayn faahfaahinta loo baahan yahay si ay u metelaan macaamiishaada badan iyo dabeecadaha u gaarka ah.
Ma-guurto ah iyo Xogta Ku-saleysan Waqtiga -Falanqaynta safarka macmiilka waxaa lagu wadaa xog ku salaysan wakhti, taas oo kuu oggolaanaysa inaad aragto sida socdaallada macaamiishu isu beddelaan waqti ka dib. Awoodda si joogto ah loogu cabbiro safarada macmiilka ee kanaalka badan iyo dhibcaha taabashada ee socdaallada ayaa ka caawiya suuqleyda inay saadaaliyaan guulaha safarka macmiilka.
Tijaabo iyo Khalad iyo Imtixaanka Waqtiga-dhabta ah -Iyadoo aan la arki karin xogtii ugu dambaysay ee is-dhexgal kasta oo ku saabsan safarka macmiilka, meheradaha ayaa loo daayay inay tijaabiyaan horumarin cusub oo ku saabsan safarka macmiilka oo dhan. Ma aha oo kaliya tani waxay lumineysaa waqti iyo kheyraad, waxay la macno tahay in suuqyadu sugi doonaan natiijooyin isku jira oo aan tilmaamin halka ay arrimuhu yihiin.
Falanqaynta safarka macmiilka ayaa siisa suuq -geeyayaasha aragti si ay u arkaan sida macaamiishu uga jawaabaan hagaajinta dhinacyo badan oo taabasho iyo waqtiyo ah. Intaa waxaa dheer, codsigan wuxuu u saamaxayaa suuqgeeyayaasha inay tijaabiyaan oo la socdaan guusha is-dhexgalka waayo-aragnimada macaamilka waqtiga-dhabta ah.
Waxaa ku shaqaynaya barashada mashiinka iyo AI, falanqaynta safarka macmiilku waxay u saamaxaysaa suuqleyda inay gartaan dhibcaha xanuunka oo dhan safarka macmiilka oo si xun u saameeya CX. Aragtidaani waxay u oggolaanaysaa ganacsiyada ay xogtu waddo inay mudnaanta siiyaan fursadaha hagaajinta safarka macmiilka iyo kobcinta dakhliga.
Ma rabtaa inaad soo saarto 30-50% dhuumo badan 90 maalmood gudahood?
Tags: dhaqanka macaamiishakhibrada macmiilkaaqoonsiyada macmiilkaSafarka macaamiishafalanqaynta safarka macaamiishafalanqaynta safarka macaamiishafaa'iidooyinka falanqaynta safarka macmiilkakhariidaynta safarka macaamiishacxdhalinta dalabdalbashada suuqgeynta jiilkamadadaalofalanqaynta kanaalka badankoritaanka dakhligawaa maxay falanqaynta safarka macmiilka
Arun waa ganacsade tiknoolajiyadeed oo dhisayay, cabbirayey, iibinaayey mareegaha macaamiisha iyo mareegaha ganacsiga muddo sannado ah. Intii uu ku guda jiray xirfadiisa, wuxuu ka caawiyay shirkadaha waaweyn iyo kuwa yarba inay kordhiyaan dakhliga oo ay ka qaybgeliyaan macaamiisha maareeye, la taliye, iyo la taliye.
8 Isbeddellada Teknolojiyadda Tafaariiqda Tafaariiqda
Ku Dalbo Istiikarrada Caadada Tayada Sare leh 2 Daqiiqo oo leh baqal Istiikaal ah